‘कर्णालीको यात्रा भगवान भरोसा’, आखिर कहिलेसम्म ?
बस दुर्घटनामा ९ घाइते, सवारी संचालन भएदेखि झण्डै १२ सय बढीको मुत्यु
| 2018-09-20 Published
निर्माण सञ्चार, जुम्ला | तिला गाउँपालिका ४ का भद्र दमाई सुर्खेतबाट घर फर्कदै थिए । लगभग घर पुग्न मात्रै ५ मिनेटको बाटो बाँकी थियो । दैव संजोक घरपुग्न नपाउदै उनी चढेको ना ६ ख ९२२ नम्बरको बस दुर्घघटना हुन पुग्यो ।
उनलाई घटनास्थलबाटै रत्तताम्मे अबस्थामै जुम्ला अस्पताल उपचारका लागि ल्याइयो । यो घटना गतसोमबार (असोज १)को हो । उपचारको घण्टौपछि होस आउँदा उनले आँसु पुछ्दै भने, ‘आखिर कर्णाली बासीको जोखिम यात्रा कहिले सम्म ?’ कर्णालीबासी कहिले सुरक्षित यात्रा गर्न पाउने भन्दै दुखेसो त छँदै छ, तर सुनिदिने कसले ।
दमाइले भने ‘हवाइजहाज चडौँ आर्थिक अबस्थाले भ्याउदैन्, कर्णाली राजमार्गको यात्रा गरौँ ।, ज्यानको सुरक्षा छैन्, भगवान पुकार्दा पनि जोगिन सकिएन ।’
अन्नत अपांग जीवन कर्णाली राजमार्गले दिएको भन्दै आँसु झार्दे रुन थाले अस्पतालकै बेडमा उनी ।
उनको दाँया खुट्टा भाचिएको छ भने हाल उपचारत अवस्थामै छन् ।
सोही घटनाका ९ जना घाईतेमध्ये कालिकोटकी, वर्ष ४२ की यसोधा शाहीको हात नै जाने अबस्थामा छ । तातोापानी स्नान गर्न जुम्ला आएकी उनीलाई दशाले अस्पतालको बेडमा पुरायो ।
अहिले उनको शल्यक्रिया भैरहेको कर्णली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालले जनाएको छ ।
घाईतले मिना शाहीले भनिन्, ‘कर्णालीको असुरक्षित यात्राले हामी मात्रै होईन सुधार नभए आम कर्णालीबासी यसको जोखिममा छन्’,भरपर्दो यात्रा नै छैन्, कहाँ कतिबेला के हुने हो ।’
‘कर्णालीमा गाडि संचालन भएदेखि झण्डै १२ सय बढीको मुत्यु भईसकेको छ, जसको जिम्मेवारी कसैले बहन नगर्नु , सडक सुधार नहुनु नै, कर्णालीबासी असुरक्षित यात्रामा ज्यान जोखिममा फाल्नु हो’, उनले भनिन् ।
अन्य विरामी सबै बेडमा छटपटाईरहेका छन् । यता, कर्णाली सरकारले सडक सुरक्षा योजना लागु गरेपनि यसको कुनै प्रभावकारीता देखिएन । वर्षको एक पटक कर्णाली राजमार्गमा घटना भइरहेकै छन् ।
भर्खरै भएको यस्तो घटनामा पनि न स्थानीय सरकार, नत प्रदेश सरकारको ध्यान जान सकेको छ ।
खाली योजनाले मात्रै कर्णाली राजमार्ग मुत्युमार्गबाट नबदलिने कर्णाली बासीको भनाई छ ।
आखिर कर्णालीको यात्रा भगवान भरोसामा कहिले सम्म प्रदेश सरकार भन्दै प्रश्न गरेका छन्, घाईते लगायत कर्णाली बासीले ।
बस दुर्घटनामा ९ घाइते
सोमबार मात्रै सर्खेतबाट जुम्ला आउँदै गरेको यात्रुवाहक बस नाग्म रारालिही सडक खण्डको बिचमा दुर्घटना भएको थियो ।
ना ६ ख ९२२ नम्बरको बस आइतबार साँझ दुर्घटना हुँदा ४ जना महिला र ५ जना पुरुष गरी ९ जना घाइते भएका छन् । जुम्ला आउँदै गरेको बस सडककै पल्टीएपछि दुर्घटना भएको हो ।
जो हेर्दा, पत्याउन नै मुस्किल ! बस सडकै पल्टेको देख्दा कसरी घटना भयो भनेर सबै दंग छन् । तर, निष्र्कषमा सडक साघुँरो भएकै कारण घटना भएको अनुमान गरिएको छ ।
दुई लेन, चार लेनका कुरा भाषण र योजनामै सिमित हुँदा त्यसको परिणाम कर्णालीबासीले भागेको नागरिक अगुवा शरोज शाहीको भनाई छ ।
उनका अनुसार पहिलो कुरो सडक साघुँरो, दोस्रो कुरो चालकको लापरवाहीले पनि कर्णालीमा घटना हुने गरेका छन् ।
घाइतेहरुको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भैइरहेको छ ।
उपचारका लागि अस्पताल पुर्याइएका बिरामीमध्ये कालिकोट रासकोटकी वर्ष ४२ की यसोधा शाहीको शल्यक्रिया भैरहेको कर्णली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालले जनाएको छ ।
उनको अबस्था गम्भीर रहेको डाक्टर पुजन रोकायाले बताए ।
उनका अनुसार घाईते अरुको अबस्था सामान्य भएपनि अपांग भने भएका छन् ।
कसैका हात भाचिएका छन्, कसैका खुट भाचिएका छन् । दुर्घटनामा कसैको मृत्यु नभएता पनि घाईते सबै अपांग अबस्थामा रहेको अस्पतालको भनाई छ ।
दुर्घटना भएको बसमा २२ जना यात्रु सवार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख डिएसपि सितारम रिजालले बताए ।
उनका अनुसार अन्य यात्रु सकुशल रहेका छन् । घाइते हुने हरुमा मनिसरा परियार, रेशमा शाही, गोरे कामी, मिना शाही, जसोधा शाही, भद्र दमाई, राम बहादुर सोरु, भरतकुमार कठायत रहेका छन् ।
घाइतेहरुको उपचार भैरहेको अस्पतालले जनाएको छ । दुर्घटना भएको गाडीमा सबै कालिकोट र जुम्लाका यात्रुहरु मात्रै सवार गरेका थिए ।
कर्णाली संवाददाता सागर परियार
बिहीबार ४ असोज २०७५